स्काईवाचर टेलिस्कोपहरूको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
रातको आकाश अवलोकन गर्न असंख्य टेलिस्कोपहरू छन्। शुरुआतीहरूका लागि केवल केही मोडेलहरूले हामीलाई यो सुन्दरता देख्ने फाइदा दिन सक्छ। ती मध्ये एउटा टेलिस्कोपहरू किन्न लायक छन् जुन ती मोडेल हुन् स्काईवाटर। यी टेलिस्कोपहरूको मुख्य लक्ष्य भनेको उन्नत गुण हो र ती सस्तो मूल्यमा सबैका लागि हुन्छन्। स्काईवाचर ब्रान्डको जो कोही खगोल विज्ञान को लागी शुरू गरीरहेको छ वा जो धेरै मांग र उन्नत क्षेत्र मा अधिक अनुभव संग उन्नत छन् को लागी उत्पादनको एक विस्तृत विविधता छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई स्काइवाचर टेलिस्कोपको सबै विशेषताहरू बताउन जाँदैछौं र हामी तुलना गर्नेछौं ताकि तपाईं यी उत्पादनहरूको बारेमा अझ बढी सिक्न सक्नुहुनेछ।
1 स्काइवाचर टेलिस्कोपहरूको उत्पत्ति र मुख्य विशेषताहरू
2 सर्वश्रेष्ठ बेच्ने स्काइवाचर टेलिस्कोपहरू
स्काइवाचर टेलिस्कोपहरूको उत्पत्ति र मुख्य विशेषताहरू
स्काईवाचर टेलिस्कोपका संस्थापक डेभिड शेन हुन् र उनी २ and बर्षको उमेरदेखि नै अनुसन्धान केन्द्रमा टेक्निशियनको रूपमा काम गर्न थाले। यहीं उहाँ स्टारगजिing र अप्टिकल डिजाइनमा रुचि राख्नुभयो। विगतमा टेलिस्कोपहरू आज भन्दा धेरै महँगो थियो। आजको लक्ष्य धेरै मानिसहरूका लागि हाम्रो रातको आकाश भन्दा परको देख्नको लागि हो। सब भन्दा चाखलाग्दो सुन्दरता मध्ये एक को रिlate्ग चिन्तन गर्नु पर्छ स्याटर्न। सन् १ 1999 XNUMX। मा Synta स्कायवाचर ब्रान्ड p सुरू गर्‍योटेलिस्कोपको गुणस्तर सुधार गर्न र उत्पादन लागत घटाउन सम्भव सबै गर्न। यस तरीकाले, यो एक ब्रान्ड संग बजार मा एक धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य र एक धेरै राम्रो डिजाइन यस संसारका सबै प्रशंसक को लागी हुनेछ।
स्काईवाचर एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपहरूसँग उत्कृष्ट गुण र पर्याप्त सस्तो मूल्य छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण ब्रान्ड मध्ये एक बनाएको छ। योसँग एकदम फराकिलो र विविध प्रस्ताव छ, विशेष गरी मध्य-दायरा खगोलीय टेलिस्कोपहरूमा विशेषज्ञता पाएको, जसले प्रयोगकर्तालाई तपाईं आकाशगंगाको आनन्द लिन मद्दत पुर्‍याउँछ कि तपाईं एमेच्योर, मध्यम वा उन्नत।
धेरै व्यक्तिको लागि, स्काईवाचर सर्वश्रेष्ठ टेलिस्कोप र सहायक गुणहरूको ब्राण्ड हो। हामी उनीहरूका विशेषताहरू र मूल्यका लागि केहि बेस्ट-सेलिंग मोडलहरूको विश्लेषण गर्ने छौं।
सर्वश्रेष्ठ बेच्ने स्काइवाचर टेलिस्कोपहरू
यो मोडेलहरूको श्रृंखला हो जुन सानो टेलिस्कोपले बनेको छ तिनीहरूलाई टेबुलमा राख्नको लागि। उनीहरूले तिनीहरूलाई जहाँसुकै लैजानु पनि राम्रो यातायात हुन्छ। यसको मुख्य विशेषताहरू बीच र, जुन सबैभन्दा खडा देखिन्छ, यसको कम मूल्य र सजिलो ह्यान्डलिंग हो। यो शुरुआतीहरूको लागि एक आदर्श टेलिस्कोप हो। तिनीहरूसँग एक धेरै आकर्षक, आधुनिक डिजाइन र पर्याप्त वजन छ यसलाई सजिलै ढुवानी गर्न सक्षम हुन।
पर्याप्त सस्तो भए पनि, तिनीहरूसँग राम्रो छवि परिभाषा छ। यदि तपाईं चन्द्रमा र केहि ग्रहहरूको छविहरू सुधार गर्न टेलिस्कोप लिन चाहनुहुन्छ भने, विरासत 90 ० यस शृ this्खलामा एक उत्तम विकल्प हो। यसले भूमिमा केही दृश्यहरू सक्षम पार्न पनि कार्य गर्दछ। यससँग धेरै उन्नत टेक्नोलोजीहरू छन् जसले कुनै पनि अक्षमा म्यानुअल तरीकाले टेक्नस्कोप सार्न अनुमति दिन्छ। यसले हामीलाई प्रयोग गर्दा हामीलाई ठूलो सान्त्वना मिल्छ। थप रूपमा, यससँग आन्तरिक मेमोरी छ with२,००० भन्दा बढी वस्तुहरू स्वचालित रूपमा अवलोकन गर्न सक्षम हुन। यदि तपाईं यस श्रृंखलाको प्रतिलिपि चाहानुहुन्छ भने, क्लिक गरेर खरीद गर्न सक्नुहुनेछ कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
यो टेलिस्कोपको अर्को रेखा हो जुन बुधलाई पनि चिनिन्छ, जो यो खगोलीय अवलोकनमा सुरू गर्न चाहान्छन् को लागी आदर्श। यो प्रयोग गर्न को लागी एक धेरै सजिलो उपकरण हो तर तपाईं एक राम्रो अनुभव को ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ। यसको माउन्ट स्थलीय अवलोकनका लागि एकदम उपयुक्त छ र उनीहरूसँग उपकरणहरूको राम्रो बृद्धि छ, यद्यपि यो बजारमा उत्तम छैन। यो शुरुआतीहरूको लागि आदर्श हो। हामीले चाहेको उद्देश्यमा निर्भर गर्दै different फरक टेलिस्कोप मोडेलहरू छन्। पहिलो स्काईवाचर पारा 3०607 हो जुन ns० मीमीको लेन्स व्यास र फोकल लम्बाइ 60०० मिमी छ। यो सब भन्दा आधारभूत टेलिस्कोप हो, त्यसैले यो यस संसारमा सुरू गर्न चाहनेहरूको लागि उपयोगी छ। यस संसारमा सुरू गर्न तपाईं यहाँ क्लिक गरेर यो टेलिस्कोप किन्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि त्यहाँ पारा merc० called भन्ने अर्को मोडेल छ जसमा हामी एउटा वेदाजीमुथ माउन्ट पाउँछौं। सबै व्यक्ति जो यो टेलिस्कोप प्राप्त गर्छन् भनेर पुष्टि गर्दछ कि यस संसारमा सुरु गर्न यो पर्याप्त गुणस्तर छ किनकि यसलाई धेरै समायोजनको आवश्यकता पर्दैन। तिनीहरू यो पनि भन्छन कि उनीहरूको खोज इञ्जिनमा यो एक उत्तम होईन, त्यसैले यो मूल्या to्कन गर्न आवश्यक हुन्छ यदि हामी पहिले नै मध्यवर्ती वा उन्नत छौं भने। यदि तपाईं यो टेलिस्कोप किन्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
अन्तिममा स्काईवाचर पारा 705०XNUMX हो। माथि उल्लेखित दुईको गुणस्तर र मूल्यको हिसाबमा यो उत्तम हो, तर त्यो केहि सीमितताहरूमा जब यो दीक्षाको हो। तपाईं क्लिक गरेर यो मोडेल किन्न सक्नुहुन्छ कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
खगोलशास्त्रीय उपकरणहरूको यस कोठामा ती सबै व्यक्तिको लागि पर्याप्त इष्टतम गुणवत्ता छ जुन खगोल विज्ञानमा पहिले नै केही ज्ञान छ। यसको तस्विर गुणस्तर एकदम उच्च छ र पर्याप्त रोचक विवरणहरू प्रदान गर्न सक्दछ वस्तुहरू जुन हामी अवलोकन गर्न सक्छौं बीचमा सौर्य प्रणाली। योसँग ठूलो एपर्चर छ जसले हामीलाई ग्रहहरू, नेबुला र आकाशगंगा एकदमै रमाइलो तरिकामा हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ।
हामी रेफ्रेक्टर अन्वेषक १mm० मिमी टेलिस्कोप हाइलाइट गर्दछौं जसमा उच्च गुणस्तरको सामग्री र इक्वेटोरियल माउन्ट र प्याराबोलिक मिररको साथ एक ट्राइपड छ। यसले गोलाकार विकृतिबाट बच्नको लागि कार्य गर्दछ। ठूलो एपर्चरको साथ उनीहरूले हामी ग्रहहरू अवलोकन गर्न सक्दछन् जहाँसम्म हामीसँग धेरै प्रकाश प्रदूषण हुन्छ। यो यसको मूल्य विचार गरी निकै चाखलाग्दो टेलिस्कोप हो। यदि तपाईं यो मोडेल किन्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यस ब्रान्डको अधिक उन्नत विकल्प स्काईवाचर अन्वेषक २००p / १००० EQ200 हो। यो एक मोडल हो जुन २०० मिलिमिटरको एपर्चर र माउन्ट छ जुन खगोलीय वस्तुहरूलाई सजिलो तरिकामा अनुसरण गर्न सक्षम हुनेछ। यो एक उत्तम दूरबीन बनाउँदछ यस संसारमा पहिलो कदम चाल्न। हामी पर्याप्त सस्तो मुल्यमा बाहिरी अन्तरिक्षको उत्कृष्ट फोटोहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं। क्लिक गर्नुहोस् कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्। ती मध्ये एउटा प्राप्त गर्न।
मलाई आशा छ कि यस जानकारी र यी तुलनाहरूको साथ तपाईं कुन स्काइवाचर टेलिस्कोप राख्न चाहानुहुन्छ भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » स्काइवाचर टेलिस्कोपहरू
येशू लाजानो भि। भन्यो
म OWN A 114X1000MM SKY-WATCHER TELESCOPE। ES EQ1 T "BINAR" ब्रान्ड हो र म यसको म्यान्युअल वा नेटवर्कहरू भेट्टाउन सक्दिन।
JESUS ​​LAZCANO V. लाई जवाफ दिनुहोस्।